कुवेतमा निधन भएका मध्ये चार नेपालीको सनाखत (नामसहित)
काठमाडौं– कुवेतमा ढिस्कोमा पुरिएर मृत्यु भएका ६ मध्ये चार नेपालीको सनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकबहादुर गाहा (पाल्पा), गंगाराम चौधरी (सिरहा), वसन्त गुरुङ (ताप्लेजुङ) र श्यामनारायण चौधरी (दाङ) छन् ।
काठमाडौं- मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीका अर्जुन परियार र तिमाल काभ्रेका विमलसिंह लामा दक्षिण कोरियाको खाङवन्दोस्थित छङसनगुन नाम्यन पुग्दा फुरफुर हिउँ परिरहेको थियो। गाडीबाट ओर्लिएर बस्ने होस्टेलसम्म पुग्दा उनीहरूको कपाल सेताम्मे भइसकेको
हातेमालोको स्मारिका ‘द भ्वाइस अफ एभरेस्ट’ १८औं संस्करण विमोचन
भारतको राजधानी दिल्लीमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सि अध्ययनरत विधार्थीहरुको छाता संगठन हातेमालो नेपाली विधार्थी समूहको वार्षिक स्मारिका ‘द भ्वाइस अफ एभरेस्ट’ १८औं संस्करणको विमोचन लक्ष्मिनगर स्थित जे.के. साह क्लासेस को प्राङ्गणमा एक
अमेरिकामा नेपालीले जिते १ लाख डलरको लट्री
काठमाडौं- अमेरिकामा बस्ने नेपाली युवाले १ लाख डलरको चिठ्ठा जितेका छन्। अमेरिकाको मेरिल्याल्डमा बस्ने निवासी नेपाली युवाले चिठ्ठा उपहारमा १ लाख डलर बराबरको रकम जितेका हुन्। यसै वर्ष रेस्टुरेन्ट ब्यबसाय
मलेसियामा ६ सय नेपालीसहित १४ सय विदेशीको रोजगारी गुम्यो
काठमाडौं । मलेसियामा पन्जा उत्पादन कम्पनी डब्लुआरपी एसिया प्यासेफिक एसडिएन बीएचडी आर्थिक रुपमा धराशायी भएपछि झन्डै ६ सय नेपालीसहित १४ सय विदेशी कामदारको रोजगारी गुमेको छ । अमेरिका भन्सार तथा
दुबईमा खतरनाक दुर्घटना: १६ नेपाली घाइते, पाँचको मृत्यु
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्समा १८ जना नेपाल सवार मिनिबस दुर्घटना भएको छ । अबुधाबीको अल रह सडक अन्तर्गत स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान ५:३० बजे दुर्घटना भएको हो ।
पोर्चुगलमा माछा मार्दा दुई नेपालीको डुबेर मृत्यु
काठमाडौं- पोर्चुगलमा दुई नेपालीको समुन्द्रमा डुबेर मृत्यु भएको छ । माछा मार्न समुन्द्रमा गएका उनीहरूको छालले बगाएर मृत्यु भएको हो । उनीहरू पोर्चुगलको लिस्बनको कास्काइसको समुद्रमा माछा मार्न गएका थिए
काठमाडौं- गैर आवासीय नेपाली संघकी निवर्तमान सचिव जानकी गुरुङले विशेष साधारणसभा बोलाइ छलफल चलाउन माग गरेकी छन्। गुरुङले गत अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न संघको नवौं विश्व महाधिवेशनमा साधारणसभाबाट अनुमोदित नभएको
इराकमा नेपालीहरूका यस्ता छन् दर्दनाक पिडा
काठमाडौं- इराकको राजधानी बग्दादस्थित एक इराकीको घरमा गोरखाकी माया गुरुङ चार वर्षदेखि घरेलु कामदार छिन् । मंगलबार दिउँसो फोन सम्पर्कमा भेटिँदा उनी बच्चालाई खाना खुवाउँदै थिइन् । बच्चा कराइरहेको सुनिन्थ्यो
खाडीमा भएका नेपालीको चिन्ता: आक्रमण भए के गर्ने ?
काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच उत्पन्न तनावसँगै खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुबारे चिन्ता शुरु भएको छ। इराक र इरानसँगै अन्य राष्ट्रमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै परिस्थिति थप चिन्ताजनक भएमा सरकारले
काठमाडौं- इराकको राजधानी बग्दादस्थित बेबिलोन होटलमा कार्यरत गोरखाका जितमान गुरुङले बाहिर के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएका छैनन् । उनलाई होटलबाट बाहिर निस्कन अनुमति छैन । ‘भित्रै काम गर्छौं ।
जापानले माग्यो एक हजार नेपाली: यस्तो छ काम
काठमाडौं- जापानले जनवरी र मार्चमा जापानी भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेर नेपालबाट १ हजार युवालाई रोजगारीका लागि लैजाने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै नर्सिङ केयर गिभरका लागि